रोमी १० | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१० भाइहरू हो, मेरो मनैदेखिको सदिच्छा तिनीहरूले उद्धार पाऊन्‌ भन्ने छ र परमेश्वरसित पनि म यही उत्कट बिन्ती गर्छु। २ किनकि तिनीहरूसित परमेश्वरको लागि जोस त छ तर सही ज्ञानअनुरूप छैन भन्ने कुराको म साक्षी छु। ३ किनकि परमेश्वरको नजरमा कसरी असल ठहरिने भनी थाह नभएकोले तिनीहरूले आफूले आफैलाई असल ठहराउन खोजे। त्यसैले असल ठहरिन पूरा गर्नुपर्ने परमेश्वरका मागहरूको अधीनमा तिनीहरू बसेनन्‌। ४ किनकि विश्वास गर्नेजति हरेक असल ठहरियोस् भनेर ख्रीष्टमै मोशाको व्यवस्थाको अन्त भयो। ५ किनकि मोशा लेख्छन्‌, व्यवस्थाको मागबमोजिम चलेर असल ठहरिएको मानिस त्यसैले गर्दा जिउनेछ। ६ तर विश्वासद्वारा असल ठहरिएकोले चाहिं यसो भन्छ: “आफ्नो मनमा यसो नभन, ‘को स्वर्ग उक्लनेछ?’ ताकि ख्रीष्टलाई तल ल्याउन सकियोस्। ७ वा ‘को अगाध खाडलमा ओर्लिनेछ?’ ताकि ख्रीष्टलाई मृत्युबाट उठाउन सकियोस्।” ८ धर्मशास्त्र के भन्छ? “वचन तिम्रो नजिकै, तिम्रो मुखैमा अनि तिम्रो मनैमा छ”; त्यो विश्वासको “वचन” हो, जुन हामी प्रचार गर्दैछौं। ९ ‘तिम्रो मुखैमा भएको वचन’ अर्थात्‌ येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर जनसमक्ष घोषणा गर्छौ अनि परमेश्वरले उहाँलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो भनेर आफ्नो मनमा विश्वास गर्छौ भने तिमीले उद्धार पाउनेछौ। १० किनकि मनदेखि विश्वास गरेर मानिस परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिन्छ तर त्यो विश्वास मुखले जनसमक्ष घोषणा गरेर चाहिं उसले उद्धार पाउँछ। ११ धर्मशास्त्र भन्छ: “उहाँमाथि विश्वास राख्ने कोही पनि निराश हुनेछैन।” १२ यहूदी र ग्रीकबीच* कुनै भिन्नता छैन, किनकि सबैका प्रभु एकै जना हुनुहुन्छ, जसले उहाँलाई पुकार्नेहरूजति सबैलाई प्रशस्त आशिष्‌ दिनुहुन्छ। १३ किनकि “हरेक जसले यहोवाको नाम पुकार्छ, उसले उद्धार पाउनेछ।” १४ तथापि, जसमाथि तिनीहरूले विश्वास राखेकै छैनन्‌, उहाँलाई कसरी पुकार्ने? अनि जसको विषयमा सुनेकै छैनन्‌, उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास राख्ने? अनि प्रचार गर्ने कोही छैन भने तिनीहरूले कसरी सुन्ने? १५ अनि कसैले नपठाईकन तिनीहरूले कसरी प्रचार गर्ने? जस्तो लेखिएको छ: “असल कुराहरूको सुसमाचार घोषणा गर्नेहरूका खुट्टा कत्ति सुन्दर!” १६ यद्यपि, तिनीहरू सबैले सुसमाचार स्वीकारेनन्‌। जस्तो यशैया भन्छन्‌: “हे यहोवा, हामीबाट सुनेको कुरामा कसले विश्वास गऱ्यो?” १७ वचन सुनेपछि विश्वास पलाउँछ। अनि वचन तब सुन्न पाइन्छ, जब कसैले ख्रीष्टबारे बताउँछ। १८ यद्यपि, म सोध्छु, के तिनीहरूले सुनेनन्‌? किन नसुन्नु, भनौं भने “तिनीहरूको सोर सारा पृथ्वीभरि गुन्जियो अनि तिनीहरूको आवाज पृथ्वीको कुनाकाप्चासम्म सुनियो।” १९ यद्यपि, म सोध्छु, के इस्राएलले बुझेन? पहिला मोशा भन्छन्‌: “तिनीहरू, जो इस्राएलीहरू होइनन्‌, तिनीहरूद्वारा म तिमीहरूमा डाह उत्पन्न गराउनेछु। एउटा जाति, जो बुद्धू छ, त्यसद्वारा म तिमीहरूभित्र भयङ्कर क्रोध जगाउनेछु।” २० तर यशैया पूरा निर्धक्क हुँदै यसो भन्छन्‌: “जसले मलाई खोजिरहेका थिएनन्‌, तिनीहरूले मलाई भेट्टाए; जसले मेरो विषयमा सोधपुछ गरिरहेकै थिएनन्‌, तिनीहरूसामु म प्रकट भएँ।” २१ तर इस्राएलको सन्दर्भमा तिनी भन्छन्‌: “अनाज्ञाकारी र मुखाले मानिसहरूतिर मैले दिनभरि आफ्नो हात फैलाइरहें।”
^ रोमी १०:१२ * स्पष्ट छ, यसले ग्रीक भाषा बोल्ने गैर-यहूदीहरूलाई बुझाउँछ।